El Toro: Inotarisirwa IP-Yakavakirwa, Cookieless Geographic Kushambadzira | Martech Zone
El Toro: Inotarisirwa IP-Yakavakirwa, Cookieless Geographic Kushambadzira
Muvhuro, March 12, 2018 Chitatu, Kurume 14, 2018 Douglas Karr
Tichangobva kubvunzurudza Marty Meyer papuratifomu yake inoshamisa, El Toro. Kune chero makambani akauraya mishandirapamwe yegeotargeted, iwe unoziva kuoma kwazvinoita izvi. IP kero dziri kuramba dzichichinja, uye kugadzirisa kwavo kurongeka idambudziko rakakosha. Ndo izvo zvinopihwa nekambani, patent-yakamirira tekinoroji inopa simba El Toro inopa kune vatengi vayo.
Imwe ye El Toro's IP ungwaru chigadzirwa chinobva kune iyo IP Targeting algorithm iyo yakakonzera kunyongana muindasitiri. Heano zvimwe zvezvigadzirwa zvavo zvinozivikanwa:
Mhuri IP Targeting - IP kunongedza hakushandise makuki, uye izvo zvinoshanduka mune yekushambadzira yedhijitari. El Toro's patent IP algorithm inosarudza iyo IP kero inoenderana neicho kero chaiyo, iyo inoshandiswa ipapo kunyatso dhijitari kushambadzira yakanangana neiyo IP / router nhanho. Imba IP Targeting inobatsira kune vanoshambadzira nekuti inosanganisa dhata risingabvumirwe; kureva, mazita evhoti akanyoreswa, dhatabhesi dzevatengi, akaenzanisira data, uye data retsamba rakananga.
Nzvimbo Replay - Venue Replay inokutendera iwe kutora vanhu eDhivhisi ID pazviitiko zvavanopinda, kwavanoshanda, kwavanodzidza, kwavanotenga, zvese nechinangwa chekushambadza kune ino yakakosha vateereri. Izvi zvinoitwa nekushandisa geoframing, tekinoroji yakagadzirwa naEl Toro. NeVenue Replay, El Toro inogona kana kudzokera kumashure munguva uye kutora zvigadzirwa kubva kuzviitiko zvakaitika kusvika kumwedzi mitanhatu yapfuura! Venue Replay ipapo inoratidza kuti inogona kunge iri kero yekumba yezvinhu izvi zvinoonekwa pachiitiko chakasarudzwa. Kubva ipapo, isu tinokwanisa kunongedza iyo network yepamhepo nedhijitari banner ads tichishandisa yedu yepamusoro tekinoroji, IP Targeting.
Reverse Wedzera - El Toro inogona kutora vasingazivikanwe saiti vashanyi 'IP kero, uye unomhanya navo kuburikidza neayo Reverse Wedzera algorithm yekumisikidza yavo chaiyo imba kana hofisi kero. Kana kuisa imwe nzira, isu tinotora isingazivikanwe saiti mushanyi IP kero, tinowana yavo chaiyo kero, uye tinobvumidza mabhenji kuti avatumire akananga akananga tsamba dzakananga kuburikidza neimwe yeEl Toro inosarudza yakananga tsamba vadyidzani mukati memaawa makumi mana nemasere ekushanya kwenzvimbo.
Dhijitari Nyowani Inofambisa - Dhijitari Nyowani Inofambisa (DNM) inopihwa pamwedzi mitanhatu uye nemwedzi gumi nembiri kunyorera. Zvese zvaunofanirwa kuita kusarudza iyo ZIP kodhi, guta, uye / kana nyika yaunoda kunongedza, kuisa zvinoonekwa pamwedzi, kurodha zvakagadzirwa uye sarudza kana iwe uchida kunongedza Pre-Movers, Escrow, uye / kana Post-Movers. El Toro's system iri zvakare chirongwa, ichikubvumidza kuti ugare pasi uye utarise vatsva vanofambisa iyo yechipiri ruzivo rwunowanikwa.
El Toro yakaunzwa kwatiri kuburikidza nevatinoshanda navo kuDigital Charisma. Kana iwe uri kambani inoda kuyedza mimwe mishandirapamwe kana kutsvaga rumwe ruzivo, bata vatinoshanda navo kuDigital Charisma:
Tanga naEl Toro
Kana iwe uri muridzi webhizinesi, wekushambadzira agency, wezvematongerwo enyika, kana Fortune 500 kambani kana mushambadzi anoda kushanda zvakananga naEl Toro:
Shanda naEl Toro
Tags: el toronzvimbo yakanangwageotargetingip kunongedzaip-yakavakirwa kunongedza